Uyenza njani uninzi lweDesktop yakho ekuHambiseni ngeMfono | Martech Zone
Uyenza njani uninzi lweDesktop yakho ekuHambiseni ngeMfono
NgoLwesibini, Septemba 11, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ekukhawuleziseni ukwamkela iselfowuni, kulula ukuba amashishini angazinanzi iisayithi zawo zedesktop, kodwa uninzi loguquko lusaqhubeka ngale ndlela, ke ayicetyiswa into yokuba ungayihoyi indawo yedesktop yakho ngokupheleleyo. Eyona meko ilungileyo kukuba neziza zamaqonga amaninzi; emva koko, ngumcimbi wokuthatha isigqibo sokuba uyafuna na isiza esime sodwa, indawo ephendulayo ekopa ubume bedesktop kwiselfowuni, usetyenziso olusebenzayo olujolise kumsebenzi, okanye isisombululo se-hybrid.
Izibalo ekusetyenzisweni kweselfowuni Qhubeka uye kwiSkyrocket
Iipesenti ezingama-71 zizonke imizuzu yedijithali echithwe kwi-intanethi eUnited States zivela kwiselfowuni. Ukunyuka ukuya kuma-75% eMexico kunye ne-91% e-Indonesia. I-UK ihamba emva kwe-61%.
E-US, abantu abadala bachitha umndilili we Iiyure ezingama-87 ngenyanga kwi-intanethi kwi-smartphone xa kuthelekiswa nedesktop.
Phantse iipesenti ezingama-70 zabantu abadala baseMelika Sebenzisa zombini iidesktop kunye namaqonga eselfowuni, ene-desktop-kuphela kunye neenombolo zomsebenzisi ezihambayo kuphela ezihamba zijikeleza amanqaku ayi-15%.
Kubalulekile ukuba uqaphele ngezi nkcukacha-manani ukuba ayisiyiyo yonke into esuka kwidesktop iye kwiselfowuni… indlela yokuziphatha kwabasebenzisi bethu itshintshela kwidesktop KANYE nakwiselfowuni. Njengomzekelo, ndihlala ndithenga iimveliso kwi-Intanethi ngesixhobo sam esiphathwayo ngelixa ndibukele umabonwakude. Kodwa andenzi nto de ndikwazi ukujonga imveliso kwidesktop yam apho ndinokubona khona iinkcukacha ezithe kratya kwiifoto zemveliso, njl.
Okuchasene kuyinyani ngokunjalo. Amaxesha amaninzi abantu emsebenzini bayakufumana inqaku okanye imveliso kwi-intanethi, emva koko babagcine kwifowuni ukuze bajonge kamva. Ngelixa iselfowuni isiba kukuya, akusoloko kungagqibekanga.
Njengokutyhala kweselfowuni, kufutshane nonxibelelwano lwentsimi, kunye ne-geolocation iba zizixhobo zokuzibandakanya ezikrelekrele kwizicelo zeselfowuni, ndizifumana ndisebenzisa iiapps ngakumbi nangakumbi. Omnye umzekelo yivenkile yasekuhlaleni, iKroger. Iapps yabo yeselfowuni iyandilumkisa kwangoko xa ndingena emnyango eKroger wasekhaya kwaye iyandikhumbuza ukuvula iapp kunye nokujonga izinto ezizodwa. Ayisiyiyo loo nto kuphela, uluhlu lweemveliso zabo lundixelela nokuba zeziphi iindlela apho ndinokufumana khona iimveliso. Oko kujolisa kunye nexesha lenziwe kwiiapps, kodwa akusoloko kuchanekile ngebrawuza yewebhu ephathekayo.
Le infographic evela I-ERS, Iqela elilawulayo leenkonzo zenkxaso ye-IT, lixoxa ngeendlela ezahlukeneyo zokuqwalaselwa xa ususa iwebhusayithi yakho yedesktop kwaye uyilungiselela iselfowuni. Ikwaxoxa kwakhona xa ishishini linokunqwenela ukujolisa kwiselfowuni ngewebhusayithi eyahlukileyo ephathekayo, iwebhusayithi ephendulayo kuyo nayiphi na iselfowuni okanye idesktop, usetyenziso lweselfowuni, okanye isisombululo ngasinye sombungu. UGoDaddy, umzekelo, unesoftware enkulu ebizwa ngokuba ngabatyali mali eyenza ukuba kube lula kubantu abanomdla kwimimandla ukuba bayifumane kwaye bayithenge… yimveliso ye-niche kodwa ilula kakhulu kunewebhusayithi.
tags: iingcebiso yoyiloUkufuduka kwe desktopngelawoisisombululo esingaxutywanga esiphathwayokwi-infographicusetyenziso lweselulasicelo se sithuthiiingcebiso zoyilo lweselfowuniizibalo ezihambayoUkufudukela kwidesktop kushukumaiwebhusayithi yeselfowuniIwebhusayithi ephendulayo